Mpanao Gazety Vehivavy 4 Ao Meksika Mijoro Amin’ny Asany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Janoary 2014 13:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Ελληνικά, Italiano, Português, Français, Dansk, English
Anisan'ny fitantarana ataonay momba ny miralenta ao Amerika Latina sy ao Karaiba ity lahatsoratra ity izay hiarahana miasa amin'ny NACLA (North American Congress on Latin America [anglisy]- (Kongresy Amerikana Avaratra mitodika amin'i Amerika Latina).
Na dia eo aza ny karama ambany sy ny loza mihatra amin'ny mpanao gazety ao amin'ny firenena mampidi-doza indrindra hoan'ny mpanao gazety ao Amerika, mbola manohy miasa sy mavitrika amin'ity asa ity ireo mpanao gazety vehivavy Meksikana sasany.
Mpanao gazety teraka tao Alemaina i Nicole, nifindra nonina tao an-tanàn-dehiben'i Mexico izy tamin'ny fanohizany ny fianarany ambaratonga ambony. Miasa amin'ny fikambanana tsy miankina izy mandritra ny tontolo andro, ary miasa amin'ny maha-mpanao gazety mahaleo-tena kosa amin'ny alina ka mitantara indrindra momba ny sakafo sy ny fitsangatsanganana. Nanangana ny bilaoginy manokana momba ny fandrahoan-tsakafo ihany koa izy, antsoina hoe “La cocinera con prisa” [es] (“Mpahandro sakafo maimaika”).
Amin'ny asany miaraka amin'ny tambajotra Periodistas de a Pie, manoratra lohahevitra momba ny zon'olombelona sy ny miralenta izy : “Maniry foana hanoratra avy amin'ny vinavina momba ny fitovian-jo hoan'ny rehetra aho; tsy dia mifantoka loatra amin'ny maha-lahy sy vavy aho raha tsy hoe misy ny tranga fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy.” Ao amin'ny fikambanana misy azy, nisafidy ny tsy hanoratra ihany momba ny fitarainana izy ireo, fa hikaroka ohatra momba ireo tantara mahomby izay manohitra ny fijaliana mahazatra mihatra amin'ireo lasibatra sy mankahery ireo olom-pirenena amin'ny tantara mahomby (mahafinaritra) avy amin'izy ireo ihany.
Mpiavy avy ao Toluca, tanàna 40 minitra avy ao Mexico i Sandra ary mpanoratra momba ny mozika sy ny teknlojia ao amin'ny Swagger [es]. Amin'ny andro tsotra izy dia mpanitsy ny lahatsoratra havoaka ao amin'ny tranonkala. Mamotopototra lohahevitra hatolotra azy ireo ho azo itrandrahana vaovao hoan'ireo mpanao gazety ao amin'ny ekipa misy azy ihany koa izy.